Anganon'ny Ntaolo - blog de la lecture à l'amour, de l'amour à la lecture
" Indray andro hono ... "
Injay fa hanomboka ny angano.
Nanaitra ahy tokoa ny nahita ny anganon'ny Ntaolo nandritra ny fialan-tsasatra nataoko. Ekeko fa boky efa tranainy tokoa ilay izy satria somary efa nanomboka niparitaka ny fonony, ireto takila misy miforiporitra. Na dia niezaka nitahiry tsara aza ilay tompon'ny boky dia tsapako fa taona maro no efa nananany io boky io.
Nampatsiahy ahy ny taona fahazaza fony mbola tsy namaky boky fa mijery sary ny nahitako ny anganon'ny Ntaolo ; nahatsiarovako ihany koa ny fandaharana natokana ho an'ny ankizy teo amin'ny Radiom-pirenena Malagasy. Tamin'izany fotoana izany dia liana tokoa nanaraka io fandaharana io rehefa tonga ny andro tsy fianarana.
Mbola tsapa ankehitriny ny fitazonan'ny olona ny tantara sy ny angano amin'ny alalan'ny lova-tsofina. Ny namakiako ny Anganon'ny Ntaolo no nahitako indray ireo fomba sy toetra izay notadiavin'ireo ray amandreny nampitaina ka natony toy ny tantara fohy sy mampisaintsaina. Toa misy efa adino sy efa nivalon'ny taona izany fomba maro izany. Nefa toa tsy afaka adinoina satria fototra sy andrin'ny malagasy izay.
Na dia eo aza ny fahatongavan'ny fomba sy ribà vahiny, tena ilaina sy tandrovina mandra-kariva ny an'ny malagasy. Izay fitazonana azy izay dia ampitaina amin'ny alalan'ny fanontana boky sy famoahana an-tsoratra izay lova rehetra nisy hatramin'izay.
Maro ireo angano hita ao anatin'ny Anganon'ny Ntaolo toy ny Ikotofetsy sy Imahaka, Iboniamasimboniamanoro, Rapeto sy Rasoalao, Izay lany haren-dany haingo, Ny niandohan'ny vonoan'olona ...
Maro ireo angano sady mahaliana. Mbola misy fanampiny ihany koa ny zavatra azo vakiana ao anatin'ny Anganon'ny Ntaolo, toy ny Hainteny, Anatra fanaon'ny Ntaolo, An-kifidy ... Ireo dia ao anatin'ny kolon-tsaina malagasy nentiny nampianarana ny ankizy sy nampisainana ny mpiara-belona.
Mahavariana ireo toro-làlana sy toro-hevitra mivoitra ao anatin'ny Anganon'ny Ntaolo. Sahaza ny rehetra. Ary ihany koa tena mbola miseho amin'ny vanim-potoana ankehitriny.
Madagasar, eny ambony eny - de part les hauteurs Le Pèlerin de Compostelle - paolo Coelho / O Diaro de una Mago
Danie 13/10/2013 17:05
Je suis certaine que des Angano que nous écoutions tous les jeudis soir, accroupis autour de la radio, viennent les tantara vala maty que deux petits chenapans (que je ne nommerais pas ici) aimaient tant mettre en scène ... ihihihih
MYR 15/10/2013 11:13
j'adore ce rappel incognito tout en s'adressant à ceux qui s'y reconnaitront ...